Tag: shirkii suuq geynta | Martech Zone
Tag: shirkii suuq geynta
Bizzabo waa madal guul dhacdo oo siisa kooxdaada dhammaan aaladaha ay u baahan yihiin si ay u abuuraan dhacdooyin wax ku ool ah halka ay ku soo bandhigayaan aragtiyo si ay uga caawiyaan dhacdooyinkaaga inay u koraan siyaabo aadan waligaa u maleyn inay suurtagal yihiin. Barnaamijka Bizzabo Event Platform Waxyaabaha Bizzabo barnaamijkeeda dhacdo-wada-jirka ah wuxuu awood u siiyaa shakhsi ahaan iyo dhacdooyin dalxiis ah si ay ugu gudbiyaan khibradaha kaqeybgaleyaasha gaarka ah iyadoo loo marayo kaqeybgal shakhsi ahaaneed oo caqli-gal ah. Diiwaangelinta Dhacdada - si buuxda u abaabul soo-booqdahaaga khibradda ka-qayb-galayaasha ee foomamka hodanka ah iyo kuwa cajiibka ah, tiro badan
Sida Loola Dhaqmo Dadka Kula Hadlaya Bulshada
Arbacada, Oktoobar 10, 2018 Arbacada, Oktoobar 10, 2018 Douglas Karr
Kani waa qoraal ay ahayd inaan qoro sanad ka hor, laakiin waxaa igu kalifay inaan qoro caawa kadib dhacdo aan ka hadlay. Sanadkii la soo dhaafay, waxaan u safray Magaalada Rapid, South Dakota waxaanan ka hadlay Concept ONE, oo ah munaasabad suuq geyn ganacsi ah oo ay aasaaseen Korena Keys, ganacsade gobol, milkiile hay'ad, iyo sharaf South Dakotan. Hadafka Korena wuxuu ahaa inuu keeno xirfadlayaal ku hadla meel ka baxsan gobolka taas oo sameyn karta
Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan ka soo qayb galay shir wicitaan oo ahaa waqti lumis dhammaystiran. Hadday ahaan lahayd barnaamijyo jilicsan, soo-jeediyayaal aan diyaar u ahayn, ama musiibo maqal ah, waxay lumisaa waqti iyo ilo badan. Xaqiiqdiina ma caawinayso markaan dareemo inay sidan oo kale dhacdo in ka badan boqolkiiba 30 waqtiga. Kulan kasta - khadka tooska ah ama qof ahaaneed - waa maalgashi shirkaddaadu ku sameyso waqti, lacag iyo dhaqaale. Hadday maalgashigaasi soo leexdo